गैरनाफामुलक बहुउपचार बाल अस्पताल खोल्दै डा.भगवान कोइराला - Health Today Nepal
गैरनाफामुलक बहुउपचार बाल अस्पताल खोल्दै डा.भगवान कोइराला
June 11th, 2019 समाचार0comments
काठमाडौ,२८ जेठः वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाले नेपालमा बाल स्वास्थ्य उपचारमा बहुउपचार तथा विशेषताको अस्पताल स्थापना गर्ने भएका छन् । डा. कोइरालाको नेतृत्वमा खुलेको काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थले बाल अस्पतालको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो । जन्मेदेखि १८ वर्षमूनिका बालबालिकाको सबै रोग उपचारका निम्ति गैरनाफामूलक अस्पताल स्थापना गर्न कोइराला नेतृत्वको इन्स्टिच्युट जुटेको छ । लगानी आह्वान नगर्दै अहिले झन्डै एक करोड संकलन भइसकेको डाक्टर कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।
यो अवधारणामा आशातित लगानी संकलन हुन सके सन् २०२२ सम्ममा गुणस्तरीय र बहुविशेषताको बाल अस्पताल सञ्चालन हुने कोइरालाले जानकारी दिए। उनले भनेः‘नेपालमा बहुविशेषताको बाल रोग उपचारमा अस्पताल छैन, भएका अस्पतालमा तमाम उपचार सम्भव भएको छैन, यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्नु मेरो चुनौती हो। यसमार्फत बाल उपचारमा क्रान्ति ल्याउनु परेको छ ।’
उनका अनुसार सुरूमा राजधानीमा सय शैयाको अस्पताल निर्माण प्रक्रिया थालिने छ। राजधानीमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि सातै वटा प्रदेशमा कम्तीमा ५० शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कूल जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या बालबालिकाको छ। तर, जन्मेदेखि किशोर हुने बेलासम्म बालबालिकाले बहुविशेषताको उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा मातृ शिशु मृत्युदरको दर घट्न पनि सकेको छैन। नेपालका अधिकांश बालबालिकामा जन्मेदेखि नै कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या रहने गरेको चिकित्सकले बताएका छन् । इन्स्टिच्युटमा बुद्ध एयरका अध्यक्ष वीरेन्द्र बस्नेत, उद्योगी भवानी राणा, दीपक सापकोटा, डा.ज्योतिन्द्र शर्मालगायतको सात सदस्यीय समिति छ। यसले विभिन्न व्यक्ति र संस्थासँग अस्पताल सञ्चालनको लागि परामर्श गरिरहेको छ।
Previous article शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन के गर्ने ? यस्ता छन् उपाय.....
Next article तातो हावा ‘लु’ ले तराईका ५० प्रतिसत बासिन्दामा स्वास्थ्य समस्या